कामुक नायिकाको फिल्म “कामसुत्र” हलिउडमा सुटिङ हुने ::netpatrika
कामुक नायिकाको फिल्म “कामसुत्र” हलिउडमा सुटिङ हुने
नयाँ दिल्ली, कात्तिक २५ (एजेन्सी)- फिल्मको नाम नै कामसुत्र। तर, फिल्म कत्तिको कामुक हुने हो त्यो त रिलिज पछि नै थाहा होला। सर्लिन चोपडाकोको हाउँभाउँ, प्लेव्वाई म्यागेजिनका लागि खिचाएको नाङ्गो फोटो र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोष्ट गरेका फोटो र्हेदा लाग्छ उनले नामको जस्तै काम गरेर फिल्मको सार्थकता दिनेछिन्।
सर्लिन चोपडा फिल्म कामसुत्रमा निक्कै बोल्ड भएर उत्रने भएकी छिन्। उनका बोल्ड सिनहरु भारतमा सुटिङ गर्दा विवादमा पर्नसक्ने भएकाले हलिउडमा गर्ने तयारी भएको हो।
फिल्मका निर्देशक रुपेश पाउलले कुनै समस्या चाहेका छैनन्। यस्तो फिल्म निर्माण गर्दा सामाजिक संगठनहरु सक्रिय भएर समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले लस एन्जल्समा सुटिङ गर्ने उनको तयारी छ। त्यसका लागि उनले स्टुडियोको बैनासमेत गरेका छन्।
भारतका गुजराज, राजस्थान, मध्यप्रदेश र मुम्बईमा सुटिङ हुने फिल्मका यौनक्रिडाका दृय्य भने हलिउडमा सुटिङ हुने भएका हुन्।
कामसुत्र थ्रीडी फिल्म हुने उनले जानकारी दिए।
यस्ता थिय उनले ट्विटरमा पोष्ट गरेका उनका केहि हट पोजहरु :
प्लेव्वाई म्यागेजिनका लागि खिचाएको नाङ्गो फोटो
ट्विटरमा उनैको क्याप्सन: Havin’ablast!!! The experience is mighty liberating!!!
ट्विटरमा उनैको क्याप्सन: With Sasha, the highly gifted photographer!!!